कांग्रेस किचलो : विरासत फर्काउने दाउमा कोइराला परिवार
लिलाराज खनाल काठमाडौं, २९ पुस
परिवारको विरासतलाई निरन्तरता दिन आगामी १४औँ महाधिवेशनबाट भने कोइराला परिवारका हस्तीहरूले कसरत गर्न थालेका छन् ।
त्यसका लागि कोइराला परिवारका सदस्यहरू बीपीपुत्र डा. शशांक कोइराला, गिरिजापुत्री सुजाता र केशवपुत्र डा. शेखर कोइराला पार्टी नेतृत्व लिने होडाबाजीमा छन् ।
नेपाली कांग्रेको क्षेत्रीय, जिल्ला र स्थानीय तहमा कोइराला परिवारका सदस्यको हालिमुहाली भए पनि केन्द्रमा प्रभाव भने महामन्त्री डा. शशांक, केन्द्रीय सदस्य सुजाता र डा. शेखर कोइरालाको देखिन्छ ।
पार्टीको १२औँ महाधिवेशनबाट सभापति भएर पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका कोइराला परिवारकै सुशील कोइरालाको १३औँ महाधिवेशनको सङ्घारमा अचानक निधन भएपछि कोइराला परिवारका सदस्यहरूले नेतृत्वको तयारी गर्न पाएका थिएनन् ।
आफूहरूको सहयोग र समर्थनमा सभापति बनाउने एजेण्डालाई गौण राख्दै कोइराला परिवारका सदस्य डा. शशांकलाई महामन्त्रीमा निर्वाचित गर्न तथा सुजाता र शेखरलाई अत्यधिक मतले विजयी गराउने रणनीति र तयारीमा नै कोइराला परिवारका सदस्यको ध्यान गएको थियो ।
पार्टी नेतृत्वका लागि केन्द्रमा प्रभाव जमाएका कोइराला परिवारका सदस्यहरूमा सुजाता सबैभन्दा सिनियर हुन् । उनको चर्चा र प्रभाव मुलुकका हरेक कार्यकर्तामा छ । अर्का नेता शशांकको व्यक्तित्व सरल र सादगी भएका कारण विवादमा पर्न नचाहने स्वभावका छन् ।
डा. शेखरले भने शशांक र सुजाताभन्दा बढी कार्यकर्तासँग घुलमिल गर्ने र जनसम्पर्क स्थापित भएका अध्ययनशील नेताको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका छन् ।
नेत्री सुजाता स्वास्थ्यका कारण बढी क्रियाशील हुन नसकेपछि उनले कोइरालाको विरासत कांग्रेसमा जोगाउन गत वर्षदेखि पिता गिरिजाप्रसादको नाममा स्थापना गरेको जीपी फाउण्डेसनको ब्यानरमा कोइराला परिवारका बाँकी २ केन्द्रीय नेता शशांक र शेखरलाई एकै ठाउँमा ल्याउने कार्यमै सक्रिय छन् ।
मुलुकका ७० बढी जिल्लामा सङ्गठन विस्तार गरेकी सुजाताले जीपी फाउण्डेसनका नाममा गतिविधि गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै आपत्ति जनाएका थिए । जवाफमा सुजाताले फाउण्डेसन शुद्ध सामाजिक संस्था भएको स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो ।
कोइराला परिवारका सदस्यबीचको एकता नहुँदा नै १३औँ महाधिवेशनमा गैरकोइराला अर्थात् शेरबहादुर देउवाको हातमा नेतृत्व गएको बुझाइ कतिपय नेताको रहेको छ । त्यसैले पार्टीको नेतृत्व आफूहरूबाट अन्यत्र जान नदिन सुजाताको प्रयासले मलजल गरिरहेको छ ।
आफूलाई बीपी कोइरालाको छोरा भएको नाताले साथीभाइको विश्वास जित्न सजिलो भएको स्वयं शशांकले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । कतिपय कार्यक्रममा सुजाताले कांग्रेसका लागि कोइराला परिवारका हरेक सदस्यले धन, सम्पति, परिवार र जीवनलाई नै जोखिम मोलेको दृष्टान्त दिने गर्छिन् ।
आगामी १४औँ महाधिवेशनका लागि कोइराला परिवारका सदस्यहरू आफू र शेखर नेतृत्वको दाबेदार रहेको महामन्त्री डा. शशांकले भन्दै आएका छन् । सोमबार झापा पुगेका डा. शशांकले आगामी महाधिवेशनमा शेखर र आफूमध्ये एक जना सभापति हुने सङ्केत गरेका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा डा. शशांकले भने, ‘केन्द्रीय सदस्य सुजाताजी स्वास्थ्यका कारण नेतृत्वको आकाङ्क्षी छैनन्, शेखरदा र ममध्ये एक जना नेतृत्वका आकाङ्क्षी हौँ ।’
महामन्त्री डा. शशांकले आगामी महाधिवेशनमा संस्थापनइतरबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, शेखर र आफूमध्ये एक जना उम्मेदवार बन्ने बताए ।
कोइराला परिवारका सदस्यको साथ सहयोगले १३औँ महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवार बनाइएका पौडेललाई सहयोग नगर्ने पक्षमा कोइराला परिवारका सदस्यहरूको तयारी देखिन्छ । उनीहरूले गिरिजाप्रसाद र शुशील कोइरालाले पार्टी र सरकारको नेतृत्व लिँदा पछिल्लो समय निकट रहेका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि आफूहरूकै साथमा राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
‘सिटौलाजी (कृष्णप्रसाद) माहिर राजनीतिज्ञ हो, उहाँको यसै भन्न सकिन्न तर हामी उहाँलाई साथै लिन चाहन्छौँ’, संचारकर्मीको जिज्ञासामा डा. शशांकले सोमबार झापामा भने । सिटौलालाई आफूसँगै राख्न सके मात्र नेतृत्व लिन सकिन्छ नत्र भन्न सकिन्न भन्ने बुझाइ कोइरालाहरूमा पाइन्छ ।
कोइराला परिवारका अर्का सदस्य सुजाता कोइरालाले समेत सिटौलाले मुलुकको शान्ति प्रक्रियामा र संविधान जारी गर्दा चुनौतीपूर्ण भूमिका खेलेकाले आफूहरूसँगै राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
अर्का नेता डा. शेखर कोइरालासँग सिटौलाको कार्यशैली, एजेण्डा र दृष्टिकोणमा एकरूपता पाइन्छ । तर, सिटौला र डा. शेखरबीच नेतृत्वमा भने एकता देखिँदैन । सभापति देउवाविरुद्ध देशभरका बहुमत जिल्ला सभापति काठमाडौंमा भेला हुँदा सिटौला र शेखर भने धनकुटामा एकै ठाउँमा थिए ।
सिटौलालाई समेत साथमा लिएर जाने सुजाताको रणनीतिअनुसार जीपी फाउण्डेसनको कार्यक्रममा अतिथि बनाउने गरिएको छ । सिटौला र शेखरले २१ पुसमा धनकुटाको मौनाबुदुकमा भएको कार्यक्रममा एउटै मञ्च प्रयोग गरेका थिए ।
तर, शेखर र सिटौलामध्ये एकले अर्कोलाई पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि सहयोग गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने स्पष्ट छैन ।
कोइराला परिवारका सदस्यमध्येबाट पार्टीमा नेतृत्व रोज्नुपरेमा सुजाता र सिटौलाको रोजाइमा समेत शशांकभन्दा शेखर नै पर्छन् ।
तर, मोरङबाट राजनीति गर्दै आएका केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजाल, महेश आचार्य, गुरुराज घिमिरे, दाङका दीपक गिरी, रोल्पाका अमरसिंह पुन, बर्दियाका सञ्जय गौतम र झापाकी सरिता प्रसाईं जस्ता केन्द्रीय सदस्यले शशांकलाई अघि सारेका छन् ।
संस्थापनइतरका धेरै जिल्ला सभापति, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू भने क्रियाशीलता र जनसम्पर्कको हिसाबले शेखरलाई नै नेतृत्वमा पुर्‍याउनुपर्ने पक्षमा अडिग छन् । बाँके, सुनसरी, मोरङ, धनुषासहित अन्य जिल्लाका कोइराला परिवारका सदस्य भने शेखर र शशांकमध्ये जो नेतृत्वमा आए पनि स्वीकार्ने पक्षमा छन् ।
कोइराला परिवारका सदस्यले हाललाई डा. शशांकलाई पनि नेतृत्वकै आकाङ्क्षी भएको देखाउने र अन्तिममा भने डा. शेखरलाई नै उम्मेदवार बनाउने तयारी भएको सुजाता कोइरालाको निवास मण्डिखाटारमा सहमति भइसकेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २९, २०७६, ०६:०५:००